COVID-19 oo gaaray deegaanada Miyiga ee Gobolada Dhexe | Universal Somali TV
COVID-19 oo gaaray deegaanada Miyiga ee Gobolada Dhexe
"Waxaan rabnaa inaan idinla wadaagno bishii February isbuucii ugu dambeeyay illaa bishan waxaa aad u badnaa bukaanada xanuunkan uu soo ritay, oo isbitaalka soo gaaray. Qiyaas ahaan dad ku dhow 900 oo qof oo calaamadihii xanuunkaas lahaa ayaa isbitaalka soo gaaray. Dadka aan talada gaarka ah siinay guryahooda ayaan dib ugu celinay oo xaalado khalafsan kuma aanay sugnayn, laakiin 172 ka mid ah waanu la tacaalnay." Ayuu yiri Agaasimaha.
Agaasimaha ayaa xaqiijiyay in 23 qof ay xanuunka COVID-19 ugu geeriyoodeen Isbitaalka Gaalkacyo, isagoona yiri "Inta naga geeriyootay waa 23 qof."
"Maalintii Jimcihii illaa Axaddii dadka isbitaalka ku geeriyooday waa toddobo qof." Ayuu yiri Dr. Maxamed Xuseen Aadan, Agaasimaha Guud ee Isbitaalka Gaalkacyo.
"Dadka magaalooyinka waaweyn ku nool marka dhibaatooyinka noocaanoo kala ah yimaada waxay is oran jireen u carara meelaha miyiga ee xanuunada faafa ee leesku gudbiya uusan gaarin, sida kanoo kale, laakiin hadda waxaan ogaanay in dadka noo yimid in aan yarayn oo tiro badan ah inay nooga yimaadeen tuulooyinka Gobolka Mudug. Xanuunku waa xanuun caam ah oo fidsan oo gaaray tuulooyinka iyo meelaha yar yar oo dhan oo gobolka ah." Ayuu yiri Agaasimaha.
"COVID-19 dhinaca Galmudug aad iyo aad ayuu noo saameeyay, haddii ay noqon laheyd mii iyo magaalo illaa tuulo, haddii ay noqon laheyd dadka uu soo ridanayo, dadka u dhimanayo iyo hanuunsan la'aanta dadka aysan u hanuunsanayn." Ayuu yiri Wasiir Falagle oo la hadlay BBC.
Tani ayaa ku soo aadaysa, xilli Gobolada Dhexe ay ka jiraan abaaro ka dhashay roob yari. Labadii xilli roobaad ee ugu dambeysay ayaa waxaan jirin wax roob ah oo ka da'ay deegaanada miyiga, taasoo reer miyiga ku khasabtay inay magaalooyinka u soo cararaan.
Kan-xigaWaqtiga loo qabtay xiritaanka xeryaha...
61,462,163 unique visits